Sateen bitro: famaritana, endri-javatra amin'ny zary, sary - Biby fiompy - 2019
Rehefa manadinadinina ny bitsiky indraindray dia mety ho olana ny safidy. Mba hahalalanao tsara ny fomba fijery mety aminao, dia mila mahafantatra tsara ny toetranao ianao.
Anisan'ny lokony samihafa ny pop bitena satin, izay malaza amin'ny hodiny manokana.
Hevitra ato Anatiny:
Appearance and parameters
Karazana sy taolana
Tanjaka sy fahalemena
Fiompiana sy fikarakarana
Famaritana sy endri-tsoratry ny nono
Ny bitin-tavokely hafa dia samy hafa amin'ny karazany hafa amin'ny ankapobeny amin'ny loko mamirapiratra sy ny tsy fahita firy.
Ny tantaran'ilay zana-trondro dia nanomboka tamin'ny taona 1932 tao anatin'ny iray amin'ireo toeram-pambolena ao amin'ny fanjakàn'i Indiana, Etazonia, raha nisy marika tsy mahazatra notsidihana tao amin'ny bitro iray tao amin'ny gavanan'i Gavan. Mba hanamafisana io endri-javatra io, ary mba hanamboarana loko hafa amin'ny karazana volon'ondry toy izany, dia nanomboka niampita olona tamin'ny fomba toy izany ny tompony, Walter Huey.
Vakio momba ireo solontena tsara indrindra amin'ny felam-bolo sy rantsana bitro.
Tany am-piandohan'ny taona 1934 tao Pendleton, dia naseho tao amin'ny fampiratiana teo an-toerana ireo bitro ireo, toerana izay nisafidianany ireo olona tsara indrindra tao amin'ilay sokatra. Tsy nandresy ny fandraisan'izy ireo, satria ny mpitsara dia nandinika ny biby araka ny toetra amam-panahy, ary nanana sata tsy mahazatra ireo satroka. Na izany aza, ny bitro sateen dia mbola nahamarika sy nahaliana azy ireo. Tamin'ny taona 1946, ny voaloham-bolo satinika 2 dia nekena voalohany indrindra. Taorian'izany dia nanomboka ny fanandramana, ary tamin'ny taona 1956, dia fantatra ny anaran'ireo biby sivily valo. Ary tamin'ny taona 2011 dia mihoatra ny 12 ny isam-batan'olona toy izany dia nosoratana tamin'ny fomba ofisialy.
Ny bitin-dranon'i Satin dia manana ireto toetra manaraka ireto:
lanja: 5 kg eo ho eo.
Ny halavan'ny vatana: lehibe, manana endrika kongresy efa ela, lava - medium.
Fotoana mahafaty: 4-5 volana;
Sakafo sisa: Ny hena madio dia 60% amin'ny lanjan'ny biby.
Ny halava sy ny lokony: 3 santimetatra, mety ho karazana lambondriaka isan-karazany, volon-doko sy mangina.
loha: vitsy kely, endrika boribory.
vozony: kely, lehibe, matevina.
Feet: lehibe, goavana, indrindra ny aoriana.
maso: kely, oval-shaped, mifandanja.
anatrehany; Miala tsiny fa manana endrika iray mihitsy aza.
Fantatrao ve? Ny haba bitika lava indrindra no voasoratra anarana dia 80 santimetatra.
Izany hoe, azontsika atao ny milaza fa biby lehibe iray izay manana karazan-tsakafo tsara sy loko tena tsara.
Satin-birinina manana satin-jiro manokana matevina. Ny anton'izany dia ny fiovan'ny ADN, izany hoe ny génie SA, izay mahatonga ny volony ho maivana, izay miantoka ny fahamoram-pony, ny fahamoram-pony ary ny mamiratra. Ny mahavariana ny zana-trondro dia ny hoe misy lavaka ao amin'ny volo, ary rehefa mandalo ny hazavana dia manomboka mamiratra ara-bakiteny ireo volo. Ny biby koa dia manana bodofotsy matevina izay manampy azy ireo handefa tsara ny andro mangatsiaka.
Fantatrao ve? alohan'ny Matetika ny bitin-trondro no navoaka toy ny menaka satria sarotra be ny manavaka azy ireo.
Ny lokon'ny biby sateen dia tena samihafa. Ny loko sy ny lokony dia azo aseho toy izao:
Ny loko maoderina dia miavaka amin'ny fandaharana manokana amin'ny loko isan-karazany: manga - ao anaty metaly, varahina sy menaka - amin'ny fifindrana amin'ny volon'ondry miloko matevina, mainty sy manankarena - avy any ambony. Misy koa ny mainty mainty izay tsy hita mihitsy. Ny tendany, ny loha sy ny maso dia maivana, ny boribory dia azo jerena, ny rambony miovaova.
Zava-dehibe izany! Ao anatin'ny toe-piainana mahatsiravina sy ny sakafo, ny bitro dia mety ho lasa mahery vaika Ahoana no amin'ny tompony, ary amin'ny bitro hafa.
Ny loko Siamese koa dia miavaka amin'ny loko tsy mahazatra: loko isan-karazany mena sy volomparasy. Ohatra, ny maizina dia ny tongotra, ny lafiny, ary ny hazava kokoa ny sofina, ny loha, ny rambony.
Inoana fa ity zaridaina ity dia iray amin'ireo toeram-ponenana sy sariaka ary mahafinaritra indrindra.
Amin'ny ankapobeny dia tsy endrika tena mavitrika izany. Ny bitin-janak'i Sateen dia mahatsapa tsara toy ny biby fiompy ary manana toe-tsaina tsara amin'ny ankizy. Saingy mbola mitaky fika sy fandehanana manokana izy ireo, rehefa lasa 20 ° C ny mari-pana ety ivelany.
Ny tombontsoa amin'ity trondro ity dia:
saron-doko sy firavaka tsy manam-paharoa;
famoahana goavana avy amin'ny hena madio;
Ny bitro kely dia afaka mamelona ny tanora tsy ny karazany ihany;
tsy mila fitsaboana manokana;
lehibe sy lanjany.
Ireto ny tsy fahampiana:
toerana be dia be ny trano, satria biby lehibe;
tsy dia marary mafy loatra.
Fantaro hoe inona no mety hampalahelo ny bitro.
Izany hoe, bitin-dalamby miaraka amin'ny fikarakarana sahaza dia tena biby fiompy tena tsara, satria manana tombony bebe kokoa noho ny tsy fitoviana izy ireo.
Ny bitin-kanina no mila kalesy malalaka amin'ny trano iray, satria ny biby dia ilaozan'ny biby. Manolo-kevitra ny haka biby fiompy amin'ny vanim-potoana madinidinika izy mba tsy hanana olana amin'ny fifindrana sy fampiasana azy amin'ny toerana vaovao. Vonona ny hanasitrana zazakely amin'ny reniny mandritra ny 2-3 volana ny zaza, satria ny fisarahana eo aloha dia mety tsy dia miraharaha loatra sy tsy mihinana.
Alohan'ny handefasana ilay bitro ao an-trano dia ilaina ny manakana ny biby hisorohana ny parasy, ny fitsaboana amin'ny myxomatosis sy ny aretina aretina viralida.
Ny rambony dia tena azo tsapain-tanana amin'ny fanafihan'ny parasita madinika, noho izany tokony ho fantatrao ny fomba hanesorana ireo kofehy sy fleoka ao anaty biby.
Ny fanatanterahana izany vaksiny izany dia ilaina aorian'ny 1.5 volana isaky ny enim-bolana. Ny aretina 2 farany dia tsy azo tsaboina, ka tena ilaina tokoa ny fanaovana vaksiny. Raha mbola marary amin'ny iray amin'ireto aretina ireto ny bitro, dia mitoka-monina fotsiny avy amin'ny hafa izy ary tsy manatanteraka fitsaboana, izany hoe ny biby fiompy dia miandry ny vokatra mahafaty.
Ny tranom-borona dia tokony ho ampy fitaovana fisakafoanana sy fisotroan-dronono, ary koa misy fandriana misy hay na sawdust eo amin'ny 5 sm mt. Maneran-tany dia asaina manova ny fako farafahakeliny in-3 isan-kerinandro, na matetika izy io rehefa lasa maloto.
Manoro hevitra anao izahay hianatra ny fomba hanatsarana ny sakafo sy ny sakafo fisotroana ho an'ny bitro amin'ny tananao manokana.
Amin'ny tsy fisian'ny sakafo avo lenta, indrindra raha vita amin'ny vy ny kalesy, ny biby dia afaka mampitombo ny aretin'ny tazo, ohatra, poddermatitis. Raha toa ka mitranga izany, dia ilaina ny mandoto ny fery amin'ny menaka Vishnevsky na miteraka amin'ny iodine. Antsoina ihany koa ny mandeha am-biriky ivelan'ny toetr'andro mafana, na mandehandeha manodidina ny trano raha tsy misy tranokely. Amin'ny tsy fisian'ny fandehanana sy fikarakarana ara-batana, mety hanjary hendratrendratra ny bitro, izay ahavitan'ireo biby ireo.
Tsy tokony havela ihany koa ny fivoahana:
fitondran-tena tsy mendrika;
Ireo mpamboly bakteria novokarina dia tokony hahalala raha azo atao ny manolotra biby an-tavy, katsaka, jirobe, kankana, sampana kiriodana, voaloboka, ahitra.
Ny hafanana tsara indrindra dia 19-20 ° C. Hery:
voankazo amin'ny endriky ny mikrô, milpy.
Afaka mampiasa sakafo manokana koa ianao. Matetika ny sakafo no ampiasain'ny sakafo. Azo atao ny mampiova tsikelikely ny sakafon'ny biby kely, ary ampidiriny tsikelikely amin'ny sakafo fihinan'izy ireo izany. Ny fepetra momba ny fitazonana any amin'ny trano fialofana manokana dia tokony ho toy ny ao an-trano ihany, fa ny tokotanin'ny trano manokana dia azo atao ny mandeha. Ho an'ny fambolena satin bitin dia tokony atao eo akaikin'ilay lehilahy ny vavy. Rehefa bevohoka ny bitro, manomboka manao akany izy. Priplod dia manodidina ny 5 isan-taona, 5-7 bitro. Noho izany, azontsika atao ny manatsoaka fa ny bitro satnita dia biby goavam-be mitana loko sy loko miavaka ary mahavariana. Amin'ny fikarakarana sahaza, afaka mahazo ny karazam-pambolena be dia be ianao ary, araka izany, ny karazana hena sy volon'ondry lehibe.
Fiompiana goavam-be miavaka - "Valek"
Herbicide "Corsair": zava-manan'aina, fihenam-bidy, fampianarana
Gara manerantany manerana izao tontolo izao Gala: yield, simplicity, long storage
Miara-mandinika ny fomba fambolena alika izahay
Antoko mainty - fahatsarana, fahasimbana ary tetika ady
Biby noforonina mba hiadiana amin'ny ady atao amin'ny Malayista
Frezy. Tsara fitondran-tena sy fikarakarana
Inona no sikidy ho an'ny tantely ary ahoana no handraisana azy ao an-trano?
Anemia mifindra amin'ny soavaly
Fomba fikarakarana tsotra ho an'ny ririnina amin'ny ririnina amin'ny fampiasana oven sy siramamy elektrika
Mpanampy amin'ny orsa ho an'ny sinus - siramamy sikamàna
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Bitro, Satin